ဦး နှောက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပါကင်ဆန်၏သင်ခန်းစာ (အတင်းအကျပ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်အကျိုးရှိသည်) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်порно
ဦး နှောက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပါကင်ဆန်၏သင်ခန်းစာ (အတင်းအကျပ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်အကျိုးရှိသည်)
GRETCHEN Reynolds, New York Times, အောက်တိုဘာလ 13, 2011 အားဖြင့်
သိပ္ပံနည်းကျရှာဖွေတွေ့ရှိ serendipitous ဖြစ်နိုင်ပြီး, ဂျေးအယ်လ် Albert, အတ္တလန်တာအတွက် Emory တက္ကသိုလ်ကပြီးတော့ပါကင်ဆန်ရောဂါသုတေသီ Cathy ဖရေဇီယာတစ်ပါကင်ရဲ့လူနာနှင့်အတူတွဲဖက်စက်ဘီးတပ်ဆင်ထားသည့်အခါ။ ဒါကြောင့်ခဲ့ နှစ်ခု, အိုင်အိုဝါဖြတ်ပြီး 2003 RAGBRAI စက်ဘီးခရီးစဉ်စီးနင်းသည့် neurodegenerative ရောဂါနှင့်အသိပညာပေးဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြ "သင်ပြန်ထိုင်နှင့်ရောဂါသင်၏အသက်တာကိုကျော်ယူပါစေရန်မလိုပါကြောင်းပါကင်ဆန်နှင့်အတူပြပွဲလူများ," ဟုဒေါက်တာအဲလ်ဘတ်ကပြောသည်။
ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်ဘဲတစ်ခုခုပထမဆုံးနေ့ရဲ့စီးနင်းပြီးနောက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ မစ္စဖရေဇီယာရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေတစ်ခုမှာ, ပထမဦးဆုံးမှာရှင်းလင်းပြသားသော micrographia တစ်ခွအေနအေရသောသူမ၏လက်ရေး, ဖြစ်ခဲ့သည်သူမကရေးသားဖို့ဆက်လက်အဖြစ်လျင်မြန်စွာသေးငယ်ပိုပြီး spidery နှင့်ဖတ်လို့မရအောင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ခြေနင်း၏တစ်ရက်ပြီးနောက်သော်လည်း, သူမအဘယ်သူမျှမအခက်အခဲ, သူမ၏လက်မှတ်နှင့်အတူမွေးနေ့ကဒ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ "လှပတိကျမ်းစာ၌လာသည်" ဟုဒေါက်တာအဲလ်ဘတ်ကပြောသည်။ သူမလည်းသူမပါကင်ဆန်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါလျှင်အဖြစ်သူမခံစားခဲ့ရကြောင်းသူ့ကိုသို့ပြောသည်။
သဘောကျပြီးယခုအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အတွင်းရှိ Cleveland ဆေးခန်းမှာစုံသုတေသနကုလားထိုင်ရရှိထားသူဒေါက်တာအဲလ်ဘတ်, သူပါကင်ဆန်ရောဂါစီးနင်းတွဲဖက်စက်ဘီးနှင့်အတူလူရှိခဲ့သည့်အတွက်စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုစီးရီးစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ပြင်းထန်သော, မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အတင်းအဓမ္မလေ့ကျင့်ခန်းကွဲပြားခြားနားဦးနှောက်ကိုထိခိုက်စေခြင်းရှိမရှိ gentler လှုပ်ရှားမှုပင်ကျန်းမာသန်စွမ်းနေသောကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ထဲမှာမထက် - များနှင့်ကျယ်ပြန့်တင်သွင်းများ - ပဏာမရလဒ်တွေကိုစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကိုကူညီနိုင်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ဒါပေမယ့်လည်းမသာစိတ်ဝင်စားဖွယ်မေးခွန်းများကိုပြုစုပျိုးထောင်နေကြသည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များစမ်းသပ်ခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်တပ်ဖွဲ့များနှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုမှဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောအချိန်အတန်ကြာလူသိများကြသည်။ သင်တစ်ဦးကြွက်ရဲ့လှောင်အိမ်ထဲမှာပြေးဘီးထားလျှင်, သင်္ဘောခုန်ပြီး run ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကြွက်နှင့်ကြွက်, running ပျော်မွေ့။ အဲဒီလှုပ်ရှားမှု, သိသာတဲ့မိမိဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျပြေးစက်ပေါ်တွင်တိရစ္ဆာန်နေရာကမကြာခဏဆိုသလိုတစ်ဦးလက်ချောင်းထုတ်လုပ်မှုသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ထံမှအကူအညီနှင့်အတူ, အရှိန်အဟုန်ကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်သို့မှသာအမြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်လျှင်မူကား, ထိုလှုပ်ရှားမှုအတင်းအကျပ်ဖြစ်လာသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်, အထူးသဖြင့်ဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှု, ပုံမှန်အားအတင်းအကျပ်လေ့ကျင့်ခန်းအပြီးတွင်ပိုပြီးအကျိုးရှိဖြစ်ကြသည်။ 2008 ကနေတစျခုလေ့လာမှုမှာ, ကြွက်အဆုံးစွန်သောတိရိစ္ဆာန်များပိုမိုမြန်ဆန်သို့ပွေးလေ၏သော်လည်း, သူတို့သည်ရှေးခယျြခဲ့သညျ့အခါအထဲသို့ပြေး ဝင်. သောသူထက်ရှစ်ပတ်ကြာပြီးတဲ့နောက်သိသိသာသာပိုပြီးသစ်ကိုဦးနှောက်ဆဲလ်တွေအတူတက်အနာကို run ဖို့အတင်းအကျပ်။ နှင့်အခြားအလားတူစမ်းသပ်မှု, ပြေးစက်ပေါ်တွင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လိုအပ်ခဲ့ကြွက်နောက်ပိုင်းတွင်ဘီးအပြေးဖို့ access ကိုပေးသည်တွေထက်မှတ်ဥာဏ်စမ်းသပ်မှုအပေါ်ပိုကောင်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာအဲလ်ဘတ်ရဲ့အလုပ်မပြုမီ, အဘယ်သူမျှမ Ethics, လေ့ကျင့်ခန်းလူတွေကို "အတင်း" ကိုဘယ်လို, ဟုလူသိများခဲ့သောအဓိကအားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူသားများအတွက်အနည်းငယ်နှိုင်းယှဉ်စမ်းသပ်ချက်ရှိခဲ့သညျ။ ဒေါက်တာအဲလ်ဘတ်ကျောမြင်းစီးသူရဲကိုတက်တက်ကြွကြွနင်းဖို့ရှိသည်မယ်လို့သေချာစေရန်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည့်တွဲဖက်၏နောက်ကျောထိုင်ခုံပေါ်မှာပါကင်ဆန်နှင့်အတူစေတနာ့ဝန်ထမ်းအားမရကြောင့်ပြဿနာဖြေရှင်း; သူသို့မဟုတ်သူမပဲ့မှုသည်အဆိုပါခြေနင်းကိုဖွင့်ပါစေနိုင်ဘူး။ ပထမဦးစွာသော်လည်း, သူသည်အသီးအသီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းသူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထားမှာတစ်ကိုယ်တော်စာရေးကိရိယာစက်ဘီးစီးခဲ့ရသည်။ အများစုမှာတစ်မိနစ်လျှင်န်းကျင် 60 တော်လှန်ရေး, ခေတ္တခဏတစ်ခု unstrenuous အဆင့်ကိုတစ်ဦးခြေနင်း cadence ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
လူနာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သောထက်သို့သော်တွဲဖက်ပေါ်ရှေ့မှာရှိတဲ့မြင်းစီးသူရဲအကြောင်းကို 90 rpm ပါတဲ့ cadence မှာပိုမိုမြင့်မားအင်အားသုံး output ကိုသို့မဟုတ် wattage နှင့်အတူခြေနင်းဖို့ညွှန်ကြားခဲ့သညျ။ အဆိုပါရလဒ်ကျောထဲမှာမြင်းစီးထိုသူတို့အဘို့အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ထက်ပိုခက်နှင့်ပိုမြန်ခြေနင်းခဲ့တာပါပဲ။
အတင်းအကျပ်စီးနင်း၏ hourlong အစည်းအဝေးများရှစ်ပတ်ကြာပြီးနောက်ဒေါက်တာအဲလ်ဘတ်ရဲ့လေ့လာမှုမှာလူနာအများစုတုန်တုန်ယင်ယင်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောခန္ဓာကိုယ်ထိန်းချုပ်ကိုသူတို့စီးရပ်တန့်ပြီးနောက်အထိလေးပတ်ကာလအတန်ကြာကြောင့်တိုးတက်မှုများသိသိသာသာလျှော့ချပြသခဲ့သည်။
သူတို့ဆန္ဒအလျောက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ပါကင်ဆန်လူနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့အစောပိုင်းရလာဒ်များနှင့်အတူနှိုငျးယှဉျသောကွောငျ့ဤအတွေ့ရှိချက်ဒေါက်တာအဲလ်ဘတ်ကပြောပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရှိပါတယ်။ သူတို့အားစမ်းသပ်ချက်မှာလှုပ်ရှားမှုအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မကြာခဏကန့်သတ်, ဒေသခံလမ်းအတွက်။ အလေးချိန်သင်တန်း, ဥပမာ, ပိုမိုအားကောင်းကြွက်သားများနှင့်နှေးကွေးလမ်းလျှောက်တိုးမြှင့်လမ်းလျှောက်အမြန်နှုန်းနှင့်ခံနိုင်ရည်မှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သော regimen ပုံမှန်အားပါကင်ဖွင့်လူနာတွေကို '' ခြုံငုံမော်တာထိန်းချုပ်မှုတိုးတက်စေခဲ့ပါဘူး။ "သူတို့ကလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဖိနပ်ကိုကြိုးနဲ့တုတ်မကူညီခဲ့ဘူး" ဟုဒေါက်တာအဲလ်ဘတ်ကပြောပါတယ်။
အဆိုပါအတင်းအဓမ္မခြေနင်း regimen, အခြားတစ်ဖက်တွင်, လေ့ကျင့်ခန်းဟာမြင်းစီး '' ဦးနှောက်အဖြစ်သူတို့ရဲ့ကြွက်သားထိခိုက်ရမည်ဖြစ်သည်ကောက်ချက်ချဖို့ဒေါက်တာအဲလ်ဘတ်ချက်ချင်းပိုကောင်း Full-ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှုမှသောအခါထို substantiated ခဲ့သီအိုရီခဲလုပ်ခဲ့တယ် မိမိအစေတနာ့ဝန်ထမ်း '' ခေါင်းခွံအတွင်း၌ကြည့်ဖို့အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI စက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ Scan ဖတ်စီးဘူးသူကိုပါကင်ဖွင့်လူနာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, တွဲဖက်စက်ဘီးစီး '' ဦးနှောက်ကိုပိုမိုတက်ကြွခဲ့ကြကြောင်းပြသခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်အတင်းအကျပ်လေ့ကျင့်ခန်း gentler regimen ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးထက်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်တိရစ္ဆာန်အစမ်းသပ်ချက်အတွက်ထွက်အလုပ်လုပ်ခိုင်းခံနေရထို့နောက်ဆဲလ်များနှင့်တစ်ရှူးများတွင်အမျိုးမျိုးသောတုံ့ပြန်မှုကိုတောင်းလာရာကြွက် '' ဦးနှောက်ထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေဟော်မုန်း၏လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအလိုငှါခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်ပါပြီ။ သို့သော်ဒေါက်တာအဲလ်ဘတ်ပါကင်ဖွင့်လူနာအတွက်အဖြေရိုးရှင်းတဲ့သင်္ချာဖြစ်မည်အကြောင်းသံသယရှိ။ အကျိုးဆက်အတွက်ဦးနှောက်ကိုပိုမိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်မက်ဆေ့ခ်ျကို generate သောနည်းပါးလာနင်းလေဖြတ်, ထက်တစ်မိနစ်အကြောင်းမရှိပိုပြီးကြွက်သားကျုံ့နှုန်းကိုပိုမိုနင်းလေဖြတ်။ အဲဒီမှာသူကထင်, ဓာတုဓါ သာ. တုံ့ပြန်မှု, ထိုမက်ဆေ့ခ်ျများ, နှင့်ပိုပြီးမက်ဆေ့ခ်ျမှတုန့်ပြန်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။
တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းစက်ဘီးစီးသူနောက်တွဲဖက်၏နောက်ကျောအပေါ်စီးရှိမရှိ၏မေးခွန်းကိုဖြစ်သကဲ့သို့အတင်းအကျပ်လေ့ကျင့်ခန်းအလားတူကျန်းမာဦးနှောက်ကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်ဟုဖွစျစေ, သူကပြောပါတယ်, ဒီအချက်မှာအမည်မသိသည်သာခြေစစ်ပွဲလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။ "90 rpm မှာ Pedaling တစ်ဦးမျှမျှတတပြင်းထန်သောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။
"ဒါဟာဖွယ်ရှိပုံရသည်" ဟုသူကဆိုမျိုးပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းနှိုင်းယှဉ်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်သင့်ကြောင်း, ဆက်လက်။ ပါကင်ဆန်နှင့်အခြားအာရုံကြောရောဂါများသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏ "အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်ခန်းသူတွေကိုလျော့နည်းအန္တရာယ်ရှိသည်ဖေါ်ပြခြင်းဒေတာရှိပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ သင်တစ်ဦးတွဲဖက် (သို့မဟုတ်ရှေ့မှာရှိတဲ့မြင်းစီးသူရဲများကခက်ခဲနင်းဖို့ harangued ခံဘို့အဘယ်သူမျှမအစာအိမ်) ကို access ကိုအဘယ်သူမျှမရှိသည်ဆိုပါကသင်သည်သင်၏ပုံမှန်လည်ပတ်နေနှစျသိမျ့ဇုန်ပြင်ပရှိနေကြသည်သည်အထိဒါဖြစ်ကောင်း, သင်၏နောက်ပြေးစက် session တစ်ခုအပေါ်အမြန်နှုန်းတက် cranking စမ်းပါ။
ဒေါက်တာအဲလ်ဘတ်ပါကင်ဆန်နှင့်အတူလူနှင့်အခြားဦးနှောက်-related အခြေအနေများသည်မိမိတွေ့ရှိချက်များ၏သက်ရောက်မှုလောက်သော်လည်းအများစု enthused နေဆဲဖြစ်သည်။ သူကပါကင်ဆန်လူနာတွေအတွက်အထူးတွဲဖက်စက်ဘီးစီးခြင်းအစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်းရန်အများအပြားမြို့ကြီးတွေမှာဝိုင်အမ်စီအေရဲ့နဲ့အတူပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတစ်နိုင်ငံလုံး program ကိုချဲ့ထွင်ရန်မျှော်လင့်နေသည်။ သူလည်းအတင်းအဓမ္မစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွင်အောက်ပါဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု၏ relearning လျော့ပါးနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ချက်အတွက်, လေဖြတ်ခံစားခဲ့ရပါတယ်သူကိုလူနာနှင့်အတူလေ့လာမှုများစီစဉ်ပါတယ်။
ပါကင်ဖွင့်ဘို့အများသို့မဟုတ်အခြားဦးနှောက်အခွအေန "ဒါကတစ်ဦးရောဂါပျောက်ကင်းမဟုတ်ပါဘူး" ဟုသူကသတိပေးထားပါတယ်။ , တုန်တုန်ယင်ယင်နှင့်အခြားရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတူ "ဒါပေမယ့်သိသိသာသာကိုကူညီပုံရသည်" "ဒါကြောင့်လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုသမှုတက်ကြွစွာပါဝင်သူဖြစ်မယ့်အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ "
သူကပါကင်ဆန်ဘို့ Pedaling သူစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး program တစ်ခု၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအဖြစ်လာမယ့်နွေရာသီအိုင်အိုဝါစက်ဘီးဖြစ်ရပ်ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်နှင့်မျှော်လင့်သူကပြောပါတယ်, ဆဲမကြာခဏတစ်ဦးတွဲဖက်စီးနှင့် legibly သူမ၏အမည်အားလက်မှတ်ထိုးသူကိုမစ္စဖရေဇီယာကပူးပေါင်းခံရဖို့